Mya Nan Dar ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်အဆောက်အဦး၊ ဟိုတယ် များတွင် ရှိ သော မီးဖိုချောင် အခန်းများကို လှပသေသပ် သန့် ရှင်းသော မီးဖိုချောင် အခန်းများ အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲ လာစေရန် အတွက် အိမ်အတွင်းပိုင်း မီးဖိုချောင်းအခန်းများကိုလူကြီးမင်းတို့စိတ်ကြိုက် အလှဆင်ပေးနေသော ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။ ဒါ့ပြင် Mya Nan Dar ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ ၏အိမ်မီး ဖိုချောင်ခန်းများကို လူကြီးမင်း တို့စိတ်ကြိုက် စိတ်တိုင်းကျ အလှဆင်ပြုပြင် မွမ်းမံ ဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိပါ သည်။ ဒါ့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်အတွင်းပိုင်း အလှဆင်ပေးရာတွင် လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်မီးဖိုချောင်များကို ခေတ်မှီဆန်းသစ်လှပသော မီးဖိုချောင်များ အဖြစ်အလှဆင်လိုပါက Myan Nan Dar ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မေးမြန်းစုံစမ်း နိုင်ပါသည်။
သန့် ရှင်း သပ်ရပ် လှပသော ရေချိုးခန်း ဒီဇိုင်း ပုံစံများ ( Bath Room )Decoration
( Silver Lotus ) ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်အဆောက်အဦး၊ ဟိုတယ် များတွင် ရှိ သော ရေချိုးခန်းများကို လှပပီးခေတ်မှီ ဒီဇိုင်းဆန်သော ရေချိုးခန်းများ အဖြစ်သို့ ပြောင်း လဲ လာစေရန်အတွက် လူကြီးမင်းတို့ ၏ ရေချိုးခန်းများကို လူကြီးမင်းတို့ စိတ်ကြိုက် အလှဆင် ပေးလျက်ရှိပါသည်။ လူကြီး မင်းတို့ ၏ ရေချိုးခန်းများကို လူကြီးမင်းတို့စိတ်ကြိုက် စိတ်တိုင်းကျအလှဆင် ဆောင် ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်အတွင်းပိုင်း ရှိ ရေချိုးခန်းများကို ခေတ်မှီ ဆန်းသစ် လှပသော ရေချိုးခန်းများအဖြစ်ပြော င်းလဲလို ပါက ( Silver Lotus ) ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
Water cylinder design hot &amp; cold water dispenser,tap faucet
1) Standing newest model, elegant, innovative 2) Cooling system: electric cooling, compressor 3) Available with refrigerator/cabinet 4) Exclusive external shape design, attractive 5) Left tap for hot water, right tap for cold water 6) Inner vessel made of stainless steel 7) Strong refrigeration, low noise low energy high performance and long service life 8) Manufactured using national food grade materials Specifications Home, Living room, hotel, school, clinic,hospital, kitchen, warehouse, garage, restaurant, bar, etc.
Empire Holding Companyမှ တင်သွင်းသော Tekaအမှတ်တံဆိပ်မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းဖြစ် သည့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ သုံး freestanding gas on glass hobမီးဖိုသည် မီးဖိုမျက်နှာပြင် ဒိုင်ခွက်နှစ်ခုပါရှိသောကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အတွက် သုံးစွဲရလွယ်ကူပြီး ချက်ပြုတ်ရာတွင် လွယ်ကူလျင်မြန်ပါသည်။ဒါ့အပြင် အရည်သွေးကောင်းမွန်သော stainless steelအမျိုးစား သံထည်ကို အသုံးပြုပေးထားသောကြောင့် ခိုင်ခံ့သပ်ရပ်ပြီးအကြမ်းခံပါသည်။ဒါ့ကြောင့် ခိုင်ခံ့ သပ်ရပ်ပြီး သုံးစွဲရလွယ်ကူသော Tekaအမှတ်တံဆိပ်freestanding gas on glass hob မီးဖိုကိုသုံးစွဲ သင့်ပါသည်။လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့်freestanding gas on glass hobကို မှာယူလိုပါက ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ Empire Holding Companyကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
သန့် ရှင်း သပ်ရပ် လှပပြီး ကြာရှည် အသုံးခံသည့် ရေချိုးကန် ( Bathtubs )
Homeplus Trading ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ် အဆောက်အဦး များတွင် ရေချိုးကန် များ ကို လူကြီးမင်းတို့ စိတ်ကြိုက် ပုံစံများဖြင့် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိ ပါသည်။၄င်းရေချိုးကန် ( Bathtubs ) များသည် ခေတ်မှီ ဒီဇိုင်းဆန်သည့်အပြင် သေသပ်လှပသောကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်ခြံဝင်း များတွင် ထားရှိ အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ ဒါ့ပြင် အရည်သွေးကောင်း မွန်သော ပစ္စည်းများဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော ကြောင့် ကြာရှည်အသုံးခံပါသည်။ ဒါ့ကြောင့်လူ ကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ၄င်း ရေချိုးကန် ( Bathtubs )ကို ဝယ်ယူအသုံးပြု ဆောက်လုပ်လိုပါက Homeplus Trading ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
The urinal shall be made of vitreous china. The urinal shall be 335 mm in length, 332 mm in width, and 642 mm in height. The urinal shall include an outlet, an outlet assy, slip nut, mounting kit, hose and hanger. Urinal shall use 0.5 to3liter per flush.
Bathroom Cabinet Series Design ဆန်းဆန်းလေးကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Pandora အရောင်းပြခန်းတွင် အဆင့်မြင့်ရေချိုးခန်းသုံး Bath Cabinet &amp; Mirror များကို ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါသည်။အရည်အသွေးကို အဓိက ထားပြီးထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် ဒီဇိုင်းဆန်းသစ် လှပမှုအပြင် ကြာာရှည်အသုံးခံသောကြောင့် ဝယ်ယူသူ Customer များ၏ စိတ်ကျေနပ်မှု အပြည့်အဝ ရရှိသော ပစ္စည်းကောင်း တစ်ခုဖြစ်သည်။
<p>အရည်သွေးပြည့်&nbsp;ရေချိုးခန်းသုံးပစ္စည်းများကို လက်လီ လက်ကားဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါပြီ</p>
Large POU Water Dispenser
<p>Water options: Hot, normal, cold</p><p><br></p><p>Reservoir capacity: 10L</p><p><br></p><p>Hot tank capacity: 5L, 800W heater, 8L/h</p><p><br></p><p>Cold tank capacity: L, 6L/h</p><p><br></p><p>Total power: 960 Watt</p><p><br></p><p>Dimension: 44x52x126 cm</p><p><br></p><p>Built-in filter: Optional</p><p><br></p><p>&nbsp;</p><p><br></p><p>Stainless steel welded frame and removable panels, <span style="white-space:pre">	</span></p><p><br></p><p>Stainless steel faucets, lead free,<span style="white-space:pre">	</span></p><p><br></p><p>Quality float valve in water reservoir for water filling controller,<span style="white-space:pre">	</span></p><p><br></p><p>Digit display of hot water temperature,<span style="white-space:pre">	</span></p><p><br></p><p>Replaceable 316 stainless steel heating element,<span style="white-space:pre">	</span></p><p><br></p><p>R134a compressor refrigerating,<span style="white-space:pre">	</span></p><p><br></p><p>Waste water from drip tray to drainage hose.<span style="white-space:pre">	</span></p>
Bottle-free UV water cooler
<p><br></p><p>ITEM NO: KSW-257<span style="white-space:pre">	</span></p><p><br></p><p>Water options:Hot, cold</p><p><br></p><p>Reservoir capacity:1.5L</p><p><br></p><p>Hot tank capacity:1.2L, 500W heater, 5L/h</p><p><br></p><p>Cold tank capacity:1.5L, 3L/h</p><p><br></p><p>Total power:600 Watt</p><p><br></p><p>UV sterilizer:4 W</p><p><br></p><p>Dimension:31x31x103 cm</p><p><br></p><p>Built-in filter:Optional</p><p><br></p><p>&nbsp;</p><p><br></p><p>Black pinstripe laminated metal left/right side panels,<span style="white-space:pre">	</span></p><p><br></p><p>Push buttons dispenser,</p><p><br></p><p>Probes sensor in water reservoir for water filling controller,<span style="white-space:pre">	</span></p><p><br></p><p>Automatic UV sterilization, water reservoir stays germfree,<span style="white-space:pre">	</span></p><p><br></p><p>Exclusive leak detection and prevention system,</p><p><br></p><p>Indicator lights of heating, cooling and UV status,<span style="white-space:pre">	</span></p><p><br></p><p>Back light of logo art,<span style="white-space:pre">	</span></p><p><br></p><p>R134a compressor refrigerating,</p><p><br></p><p>Pouring water with removable drip tray.</p>
<p>ITEM NO: KSW-291 Cold water</p><p><br></p><p>Water options:Cold</p><p><br></p><p>Cold tank capacity:3L, 10L/h</p><p><br></p><p>Total power:160 Watt</p><p><br></p><p>Dimension:43x31x122 cm</p><p><br></p><p>Built-in filter:Optional</p><p><br></p><p>&nbsp;</p><p><br></p><p>Stainless steel welded frame and removable panels,</p><p><br></p><p>Press type bubbler tap for covenience,</p><p><br></p><p>R134a compressor refrigerating</p><p><br></p><p>Fan-cooled condenser made of copper tube and aluminium fins,</p><p><br></p><p>Waste water from drip tray to drainage hose.</p>
Wall Mounting Water Fountain
<p>Water options:Room temperature</p><p><br></p><p>Dimension:87x36x87 cm</p><p><br></p><p>&nbsp;</p><p><br></p><p>Stainless steel constrction, great strength and durable,</p><p><br></p><p>Wall mounting installation and press type bubbler tap for convenience,</p><p><br></p><p>Higher and lower bubblers enable adult and child to use,</p><p><br></p><p>Bowl shape sink featuresadrainage hose system,</p><p><br></p><p>Optional remote water chiller enable to make cold drinking water.</p>
Ground Mounting Water Fountain
<p>Water options:Cold</p><p><br></p><p>Cold tank capacity:2.2L, 8L/h</p><p><br></p><p>Total power:160 Watt</p><p><br></p><p>Dimension:72x32x102 cm</p><p><br></p><p>Built-in filter:Optional</p><p><br></p><p>&nbsp;</p><p><br></p><p>Stainless steel welded frame and removable panels, <span style="white-space:pre">	</span></p><p><br></p><p>Press type bubbler tap for covenience,<span style="white-space:pre">	</span></p><p><br></p><p>R134a compressor refrigerating<span style="white-space:pre">	</span></p><p><br></p><p>304 stainless steel water tank and external copper coil evaporator,<span style="white-space:pre">	</span></p><p><br></p><p>Fan-cooled condenser made of copper tube and aluminium fins,<span style="white-space:pre">	</span></p><p><br></p><p>Bowl shape sink featuresadrainage hose system,<span style="white-space:pre">	</span></p><p><br></p><p>Higher and lower bubblers enable adult and child to use,</p>
<p>ITEM NO: KSW-SR40</p><p><br></p><p>Water options:Hot, normal</p><p><br></p><p>Hot tank capacity:40L, 25L/h</p><p><br></p><p>Total power:3000 Watt</p><p><br></p><p>Dimension:37x50x80cm</p><p><br></p><p>Built-in filter:Negative</p><p><br></p><p>&nbsp;</p><p><br></p><p>Welded stainless steel frame, firm and durable,</p><p><br></p><p>Lead free 304 Stainless steel water faucets,</p><p><br></p><p>Step-by-step heating technology only allows filling ofasmall amount of water one time,</p><p><br></p><p>Get the water boiled instantly, repeat the filling and heating till tank is full,<span style="white-space:pre">	</span></p><p><br></p><p>Replaceable 316 stainless steel heating element,</p><p><br></p><p>Display screen with water temperature, water level and clock,</p><p><br></p><p>Energy saving mode with timer to switch on/off.</p>